पत्रकारले किन गरे भारतीय दूतावासको कार्यक्रम बहिष्कार ? - Nepal News - Latest News from Nepal
काठमाडौं, जेठ ५ – बैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पपछि भारतले देखाएको तत्परता र सहयोगको बावजूद पनि नेपाली मीडियामा भारतीय कामको निकै आलोचना भयो । भारतीय मीडियातर्फ इंगित हुँदै शुरू भएको विरोध पछि भारतीय सेना, भारतीय दूतावास र भारतीय सहयोगको पनि निकै आलोचना भयो । यहाँसम्म कि कतिपय ठाउँमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुतलासम्म जलाइयो ।
पछिल्लो समय भारतीय दूतावासको राहत वितरण र आफूले गर्दै आएको उद्धार र सहयोग जस्ता कार्यक्रममा पत्रकारहरूको नगन्य उपस्थिति हुँदै गएको छ । भारतीय दूतावासले आयोजना गर्ने कार्यक्रमको सूचना पाउन बित्तिकै भीड लाग्ने गरेको लैनचौरमा हिजो आज त पत्रकारहरूलाई फोन गरेर बोलाउँदा पनि जान छाडेका छन् । काठमाडौंका पत्रकारहरूले भारतीय दूतावासको कार्यक्रमलाई अघोषित रूपमा बहिष्कार गरेका छन् पनि भन्न सकिन्छ । नेपाली मीडियाले मात्र होइन, भारतीय पत्रकारहरूले समेत दूतावासको कार्यक्रममलाई बहिष्कार गरेका छन् ।
आखिर किन यस्तो भयो त ? भन्ने जिज्ञासामा अधिकांश पत्रकारहरुले दूतावासकै अधिकारी/कर्मचारीको बोली व्यवहारले गर्दा यस्तो भएको भन्छन् । भारतीय पक्षधर मानिने पत्रकारहरूसँगसमेत भारतीय दूतावासले सामान्य शिष्टाचार पनि नगरेको गुनासो गर्न थालेका छन् ।
भारतीय दूतावास नजिकका एक जना नेपाली पत्रकारले आफूले भोगेको पीडा सुनाउँदै भने, “दूतावासबाट फोन आयो, पत्रकार सम्मेलन छ, आई दिनु पर्यो भनि आदेशात्मक शैली प्रयोग गर्नुभएको थियो । यसले गर्दा त्यहाँ जान मन त भएन तर पेसाको दायित्व पूरा गर्न जानै पर्छ भनि त्यहाँ गए तर गेटमा त्यहाँ कर्मचारीले जुन किसिमको व्यवहार गर्यो त्यसले दूतावासप्रति वितृष्णा उत्पन्न गर्यो ।
ती पत्रकार भने, ‘दूतावासको व्यवहारका कारण भित्र रिर्पोटिङमा नगई फर्केको छु । दूतावासका सुरक्षागार्डले समेत नेपाली पत्रकारहरूलाई अपमानित गर्न थाले पछि दूतावासको कार्यक्रम र पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरूको संख्या निकै कम हुन थालेको छ । भक्तपुरमा भारतीय सरकारको सहयोगमा सञ्चालित लंगर र बासस्थानको कार्यक्रम होस् अथवा सिनामंगलमा रहेको भारतीय सेनाको मेडिकल क्याम्पमा भारतीय राजदूतको भ्रमण, अथवा दूतावासले विभिन्न समयमा विभिन्न संघ संस्थाहरू मार्फत गरेको सहयोग, यस्ता कुनै पनि कार्यक्रममा नेपाली पत्रकारहरूको उपस्थिति नगन्य हुने गरेको छ ।
भारतीय पत्रकारहरूको आफ्नै गुनासो
नेपाली पत्रकारहरू मात्रै होइनन्, भारतीय राजदूतावासका कर्मचारीको व्यवहारले भारतीय संचार माध्यममा काम गर्ने पत्रकारहरू समेत् असन्तुष्ट देखिएका छन् । दूतावासमा प्रेस हेर्ने अभय कुमारको व्यवहारले गर्दा भारतीय मीडियामा काम गर्ने पत्रकारहरू दूतावासको कुनै खबरको वास्ता गर्न छाडेका छन् । अभय कुमारले फोन न उठाउने, फोन उठाए पनि गलत र भ्रामक खबर दिने, भारतीय राजदूतसँग अन्तरवार्ता कुनै हालतमा हुँदैन जस्ता कुरा गरे पछि भारतीय पत्रकारहरू पनि दूतावासको कार्यक्रमलाई बहिष्कार गरेका छन् । अभयकुमारले राजदूत रे सँग अन्तरवार्ताका लागि समय मिलाउन सकिदैन भनि जवाफ भारतीय पत्रकारहरुलाई दिएका थिए तर पत्रकारहरुले अभयलाई जानकारी नै नदिइकन रेसँग अन्तरवार्ता लिएका छन् ।
भारतीय नेशनल न्यूजमा काम गर्ने राजेश द्वीवेदी भारतीय दूतावासकै कारण नेपालको रिर्पोटिङ छाडेर भारत फर्केका छन् । फर्किनु अघि रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भने, ‘भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजीत डोभाल र भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकरको भ्रमणको बेला पनि अभय कुमारले हामीलाई कुनै सूचना दिनु भएन बरु हामीसँग गलत व्यवहार गर्नुभयो । गलत सूचना दिएर भ्रमित गर्नुभएको छ । यसले गर्दा हामीबचि भनाभन पनि भयो ।’
भारतीय पत्रकारहरू पनि भारतीय दूतावासको कर्मचारीको व्यवहारले आजीत भएर त्यहां फोन गर्न छाडेका छन् ।
भारतीय संचारमाध्यममा नेपालमा बसेर विगत ३५ वर्षदेखि कार्यरत एक जना वरिष्ठ पत्रकारले भने, ‘भारतीय दूतावासले दलाल प्रवृतिका केही गैर पत्रकार र कुनै पनि संचारमाध्यममा कामै न गर्ने र दूतावासको अगाडि पछाडि गर्ने कार्डधारी पत्रकारको बनाएको घेरालाई नतोडेसम्म दूतावासको विरोध र बहिष्कार जारी नै रहने छ ।’
भारत सरकारले चाहे जतिसुकै राम्रो काम किन नगरोस् यहाँ रहेको दूतावासका कर्मचारीले नेपाली पत्रकारलाई सम्मान नगरेसम्म त्यसको सकारात्मक प्रचार प्रसार हुनै नसक्ने उनले बताए ।